Real Madrid ayaa ku guulaysatay gool dhaliyaha aadka loo qiimeeyo ee xulka %
By Badrudiin Mohamed	 Last updated May 4, 2019
Real Madrid ayaa ku guulaysatay gool dhaliyaha aadka loo qiimeeyo ee xulka Serbia iyo kooxda Eintracht Frankfurt ee Luka Jovic.
Kooxo Badan Oo Yurub ah oo ay Barcelona iyo Chelsea ugu horeeyaan ayay Real Madrid ka hor qaadaysaa saxiixa Eintracht Frankfurt iyada oo Mariano Diaz uu heshiiskan qayb ka noqday.
Wargayska Diario AS oo ka soo baxda dalka Spain ayaa shaaciyay in Real Madrid ay soo gaba gabaysay heshiiska Luka Jovic isla markaana ay heshiis la gaadhay kooxda Frankfurt iyada oo Mariano Diaz uu jahada kale u dhaqaaqi doono.
Real Madrid ayaa 60 milyan yuro ka soo bixinaysa 21 sano jirkan reer Serbia ee Luka Jovic kaas oo bandhig cajiib ah soo sameeyay xili ciyaareedkan iyada oo Benfica 12 milyan yuro lacagtan ka heli doonta halka Frankfurt ay 48 milyan qaadan doonto.
Heshiisyada Luka Jovic iyo Mariano Diaz ayay wararku sheegayaan in ay yihiin laba kala madax banaan oo ay labada kooxood si kala gooni-gooni ah uga xaajoonayaan iyada oo Los Blancos doonaysa in ay Diaz uu ku biiro Eintracht Frankfurt.
Mariano Diaz oo xagaagii la soo dhaafay ku soo laabtay Real Madrid kadib markii uu 21 gool u soo dhaliyay Lyon hal xili ciyaareed laakiin 656 daqiiqo oo kaliya ayuu xili ciyaareedkan ka soo muuqday Madrid ee xili ciyaareedii ay kooxda maamulayeen Julen Lopetegui, Santiago Solari iyo Zinedine Zidane.
Zidane ayaan aaminsanayn Mariano Diaz isaga oo kulankii Rayo Vallecano oo kaliya shaxdiisa ku soo bilaabay, laakiin Zidane ayaa diyaar u ah in uu Luka Jovic ku soo xoojiyo weerarka kooxdiisa ee xili ciyaareedka soo socda.
Kadib markii ay Real Madrid hore ugu guulaysatay difaaca dhexe ee FC Porto ee Eder Militao waxa uu hadda Zidane helay adeega Luka Jovic kaas oo ay heshiiskiisa ka hadhsan tahay in la dhamaystiro sida ay wararka Spain laga helayaa xaqiijiyeen.
Si kastaba ha ahaatee, shaqada suuqa kala iibsiga ee Real Madrid ayaa sii socon doonta iyada oo kadib kulamada dhamaadka xili ciyaareedkan uu Zidane si buuxda u kala shaandhayn doono xidigaha uu haysto
Mogadishu City Club Oo Guul Muhiim Ah Ka gaartay Midnimo
Hordhaca: Newcastle United Vs Liverpool: United Oo Doonaysa guusheedii 3-aad 4-tii kulan ee ugu dambeyay